Global Voices teny Malagasy » Mitady Eid Ao Anaty Ady Eritreritra Momba Ny Seha-Javakanton’i Eid ao Syria · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Oktobra 2013 5:49 GMT 1	 · Mpanoratra Nour Al Ali Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Syria, Ady & Fifandirana, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Politika, Zavakanto & Kolontsaina
Mizara ny fomba fijeriny momba ny Eid Al Adha, mandà ny hankalaza fety raha mbola maro ny iharam-boina  sy mitsoa-ponenana noho ny korontana mitohy any aminy ireo manan-talenta sy feo isan-karazany ao Syria.
Etsy ankilany ny fikarohan'ny mpahay mozika Wael Alkak  amin'ny hira nentin-drazana Syriana ao amin'ny raki-kirany farany, nampitondrainy ny lohateny hoe “Hiran'ny Eid,” izay naka aingam-panahy tamin'ny sangan'asan'i Tammam Azzam mitondra ny lohateny hoe “Bon Voyage”.
Manana tononkira miverimberina mivoatra tsikelikely eny am-pandehanana ilay hira. Tahatahaka izao ny dikanteniny:
Tsy misy olona mahazaka na iza na iza,
fa ory avokoa ny rehetra.
fa samy very daholo ny rehetra (x2).
Tsy misy tavela hizaka na iza na iza,
raha very daholo ny rehetra.
raha samy mandositra ny rehetra.
Tahaka ny mitaratra ny tsy firaharahiana ankapobeny amin'ny Eid ny tononkira, sy ny mety ho tsy faharetan'ny olona ao Syria [intsony]. Na izany aza manaraka ny fahakiviana ankapobeny efa asehon'ny Artista Syriana ny hiran'i Alkak. Indreto ambany ireto ny ohatra vitsy:
Nataon'i Maher A. Husn. mivaky hoe, “Tsy mila ny Eid-nareo izahay.”
Nataon'i Wajdi Saleh, mitondra ny lohateny hoe, “Tsy mila Eid raha maritiora ny zanakay,” manondro ireo ankizy maritiora ao Ghouta.
Artista miaka-danja Sedki Al Imam mijery am-pihomehezana ny Eid
Sariitatr'i Husam al-Saadi mampiseho an'i Bashar Assad mitetitetika ny sarintanin'i Syria tahaka ny fanatitra amin'ny Eid.
Hosodokon'i Suzan Yaseen “Ny Maritiora sy ny Akanjon'ny Eid.”
Mohannad Hamawi manolotra fanomezana feno ra voafono.
Ny artista hafa indray mijery ny lafiny famonjena ny mahaolona ao amin'ny ady ka mitodika any amin'ny mpitsoa-ponenana:
Hani Abbas mametraka sary manezy miresaka ny tranolain'ny mpitsoa-ponenana
Tsy misy dikany ny seha-javakanton'i Syria raha tsy misy ny fandraisana anjara avy amin'ny vahoaka ao Kafranbel . Misioka ny afisiny farany ny mpisera Twitter Racan:
Eidim-pifaliana avy eto Syria
Na izany aza, misy ny hafatra tafiditra ao anatin'ireo sangan'asa ireo izay azo raisina hoe : Manakenda izay sisa tavela ao amin'ny firenena ny zava-tsarotra sedrain'i Syria ka mila famonjena izy. Manazava ny zavamisy mampihoron-koditra  iainan'ny mponina ao Syria ny mpanoratra fanta-daza Amal Hanano, fa ny hena, ohatra, dia efa lafovidy ka tsy taka-bidin'ny maro intsony.
Maro ny olona eto #Syria no tsy hamono ondry atao fanatitry ny Eid amin'ity taona ity. Lasa sakafo nofinofin'ny olona an'arivoarivony ny hena
Amin'ny alalan'ny bika, miangavy ny olona hanao fanomezana amin'ny fanatitry ny Eid ho an'i Syria ny Ekipa Multimedia n'ny Revolisiona Syriana:
Nataon'ny ekipa multimedian'ny Revolisiona Syriana, izay mandrisika ny olona handefa ny fanatitry ny Eid any Syria. Mieritreritra ilay ondry hoe, “Alefaso any Syria aho fa ry zareo any no mila ahy bebe kokoa.”
Na dia ireo any am-pielezana aza dia mahatsapa ny maharary amin'i Syria, ka sarotra ho azy ireo ny hankalaza, tahaka an'i Omar Kuptan:
Tsy afa-mividy akanjo ho amin'ny Eid na hahatsapa zavatra mifandraika amin'ny Eid raha zara fa velona ny firenenao.
Ny hafa matahotra ny halaviran-tany:
Eid hafa lavitry ny tanindrazana
Na dia eo aza ireo fijery matroka sy mahita ny zavamisy ireo dia misy kosa ny feo mirary soa ho an'i Syria ao anaty sarintsoratra sy sary marevaka, tahaka ny miteny hoe ho lasa izany rehetra izany:
Avy amin'i Abdo Meknas
Ary handalo, tsy maintsyl.
An'ny tompony tsirairay avy ny Copyright an'ireo mpaka sary ampiasaina amin'ity lahatsoratra ity, nampiasaina eto miaraka amin'ny filazana ny anaran'ny tompony.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/10/21/53379/
 mitsoa-ponenana : http://www.globalpost.com/dispatch/news/afp/131014/syrians-find-safety-eid-al-adha-holiday-iraq-0
 Wael Alkak: http://www.youtube.com/user/waelalkak
 Tammam Azzam : https://www.facebook.com/pages/Tammam-Azzam/218202171577341?fref=ts
 vahoaka ao Kafranbel: http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/07/05/the_little_syrian_town_that_could
 October 15, 2013: https://twitter.com/Racanarchy/statuses/390014393888833536
 zavamisy mampihoron-koditra: http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/10/14/Syrian-imams-plead-for-help-after-permitting-people-to-eat-dogs-cats-.html
 October 14, 2013: https://twitter.com/AmalHanano/statuses/389609963141595136
 Ekipa : https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-The-Syrian-Revolution-Multimedia/211283805573425
 October 11, 2013: https://twitter.com/OmarKuptan/statuses/388595360853393408
 October 14, 2013: https://twitter.com/1996Alia/statuses/389791142767628289